I-15 Easy Halloween yezandla yabantwana | Imisebenzi yezandla ivuliwe
15 I-Halloween yezandla zabantwana
Elizabeth Catalan | | Imisebenzi yeHalloween, Izihlandlo ezikhethekileyo
IHalloween iyeza! Omnye wemibhiyozo abantwana abayithanda kakhulu kuba sisihlandlo esihle sokunxiba njengabalinganiswa babo ababathandayo, badlale imidlalo eyoyikisayo kunye nokuqokelela iilekese ezininzi ezindlwini ezikufutshane.
Nangona kunjalo, ukuba unomdla wokuzonwabisa, le holide ikwalixesha elifanelekileyo lokuba ukhulise umbono wakho kunye nobuchule. Kule posi ndibonisa uninzi Imisebenzi yeHalloween yabantwana ukuba abantwana badubule kule Okthobha. Ukusuka kwiilekese, kwiibhukhimakhi nakwizidanga zeentyatyambo ukuya kwimizobo kunye nezilo ezahlukeneyo zokudlala nazo. Sukuphoswa yiyo!
1 Ungayisonga njani ilekese ngeHalloween
2 Ipakethe yeMonster yokunika ilekese kwiHalloween
3 Imincili yolly yeHalloween
4 Umama wekhadibhodi emnyama yeHalloween
5 Imisebenzi yeHalloween yabantwana. Ukupeyinta kwegqwirha
6 Uyenza njani iilekese ezimile njengesiporho
7 Uyenza njani ikati emnyama kwiHalloween
8 Igolide yeHalloween yokwenza nabantwana
9 Igqwirha eva irabhu amanqaku ngeHalloween
10 Ukhakhayi lwaseMexico lubhiyozela uSuku lwabafileyo okanye iHalloween
12 Iphepha leziporho zokuhombisa iqela lakho leHalloween
13 Amakhadi abantwana ezilo ukubhiyozela iHalloween
14 Amagqabi wamehlo anegazi ukuhombisa iHalloween
15 Ipowusta «BOO» yeHalloween
Ungayisonga njani ilekese ngeHalloween
Abancinci bathanda iilekese kwaye babhiyozele itheko lolu hlobo, iilekese ngekhe zingabikho. Kuqhelekile ngeHalloween ukuba abantwana baye kwindlu ngendlu becela ilekese besithi ibinzana elidumileyo "iqhinga okanye unyango."
Ukuba ulinde emnyango abantwana bakho bazifihle becela iilekese okanye uza kubhiyozela itheko ekhaya nabantwana, obu bugcisa buya kuba luncedo kakhulu kwaye yenye yazo Imisebenzi yeHalloween yabantwana kulula ukuyilungisa.
Uya kudinga iilekese ezimbalwa, ukumakisha, iphepha lokusonga, isikere kunye neglue. Ukuba ufuna ukufunda ukuba ungayenza njani, ungaphoswa sithuba Ungayisonga njani ilekese ngeHalloween.
Enye indlela yokupakisha iilekese eziza kusasazwa kwitheko leHalloween oku kuhle ipakethe enkulu yemonster. Abantwana baya kuyithanda! Ngokukodwa ukuba bayonwaba ukulungiselela ezi mpahla bodwa baze bazisasaze phakathi kwezinye iindwendwe kumsitho, nokuba bangabanye abantwana okanye abantu abadala. Akukho mntu uba krakra ngenxa yeelekese!
Izinto ezimbalwa ziya kwanela ukwenza le phakheji ye-monster, kwaye usenokuba sele unazo ezininzi ekhaya: ikhadibhodi evela kwiphepha lendlu yangasese, amakhadi anemibala, amehlo ezobugcisa, umpu weglue oshushu kunye nezikere. Le yenye yezona zinto zilula kwaye zimnandi kwezobugcisa zeHalloween zabantwana abanokuzilungiselela ekhaya okanye esikolweni. Fumana imiyalelo kwisithuba Ipakethe yeMonster yokunika ilekese kwiHalloween.
Imincili yolly yeHalloween
Le yenye yezona zinto zilula zeHalloween kubantwana abanokubonisa kuzo ngokuthe ngcembe intsingiselo yeli theko nokuba ithini ukuba basebancinci kakhulu. Baya konwaba kakhulu!
Ngolawulo lwakho ungabanceda balungiselele olu lonwabo IHalloween inamathela imilo yezilo. Uya kudinga kuphela izinti ze popsicle, amakishayo anemibala, amehlo ashukumisekayo, isikere, iglu, iteyiphu kunye nomtya omhlophe. Uyayibona ukuba yenziwa njani inyathelo ngenyathelo kwisithuba Imincili yolly yeHalloween.
Umama wekhadibhodi emnyama yeHalloween
Oomama bangenye yeempawu eziqhelekileyo zeHalloween zokugqoka kunye nokwenza ubugcisa. Ukuba kula maqela ufuna ukuphinda wenze nabancinci bonke abalinganiswa beHalloween, oku Ikhadibhodi emnyama yomama ayinakuphuthelwa kuluhlu lwakho.
Kwakhona yenye yezona zinto zilula zeHalloween ezenzelwe abantwana! Abantwana baya kufuna kuphela iphepha lokwakha elimnyama, amehlo obuqhetseba, uboya obumhlophe ukwenza ii-bandage, iglu, iteyiphu, ipensile nezikere. Uninzi lwabo abantwana bagcina kumatyala abo esikolo, ke baya kuba nawo kufutshane.
Amanyathelo okwenza lo mama kulula kakhulu. Fumanisa imiyalelo yale mveliso, eposini Umama wekhadibhodi emnyama yeHalloween.
Imisebenzi yeHalloween yabantwana. Ukupeyinta kwegqwirha
IHalloween ikwalixesha elifanelekileyo lokuba abantwana baphuhlise ubuchule babo bokwenza imizobo okanye ubugcisa bokuhombisa indlu, itheko okanye iklasi yabo esikolweni ngalo mxholo.
Njani ngokwenza i ukupeyinta umthakathi omncinci ukonwaba? Ngezinto ezimbalwa onazo ekhaya kunye netemplate oya kuyifumana kwisithuba Imisebenzi yeHalloween yabantwana. Ukupeyinta kwegqwirha Ngokuqinisekileyo abancinci baya kuba nakho ukwenza ipeyinti ephezulu yoqobo abanokuyithanda ukubonisa wonke umntu?
Ayizukuthatha thuba lide ukuyenza kwaye kwisithuba uya kuyifumana ividiyo enemiyalelo. Ukongeza, inokwenziwa ngokwezifiso ngokupenda umlinganiswa weHalloween owuthanda kakhulu: isiporho, ivampire, iwolf, njl.
Uyenza njani iilekese ezimile njengesiporho
Le yenye yezobugcisa zaseHalloween zabantwana abaya kuzithanda kakhulu zezi ilekese emile njengesiporho. Zilula ukuzilungiselela kwaye zikwalungile ukuhombisa itafile ukuba unika iqela labantwana leHalloween ukuze abantwana bonwabe. Banokukunceda ubalungiselele!
Uya kufuna kuphela ezi zinto zilandelayo: iilelipops, isiphawuli esimnyama, itape kunye nomtya omnyama, iphepha elimhlophe kunye nezikere. Akukho xesha uza kuba neziporho ezincinci ezimangalisayo zokumangalisa zonke iindwendwe.
Kwiposi Uyenza njani iilekese ezimile njengesiporho uya kufumana onke amanyathelo okwenza.
Uyenza njani ikati emnyama kwiHalloween
Awunakuphuthelwa yinto entle ikati emnyama ukuhombisa indlu yakho le Halloween. Abantwana baya kuthanda ukwenza lo msebenzi! Uya kudinga iityhubhu zekhadibhodi, isikere, ipeyinti emnyama, ikhadibhodi emnyama namhlophe, iglu, kunye neempawu zokumakisha.
Inkqubo ilula kakhulu. Kungenxa yoko le nto yenye yezobugcisa iHalloween yabantwana endikucebisa ukuba uyenze ngayo. Uzakufuna kuphela ngomso omncinci ukuze uqokelele iziqwenga uze uzipeyinte. Uyayibona ukuba yenziwa njani ngeposi Ikati emnyama yeHalloween.
Igolide yeHalloween yokwenza nabantwana
Ngaba uceba ukuphosa iqela labantwana laseHalloween kulo nyaka kwaye ufuna ukumangalisa iindwendwe ngokwenza uninzi lwemihombiso ngesandla? Ke kuya kufuneka ujonge oku Igolide yeHalloween yokwenza nabantwana.
Inemibala kwaye kulula kakhulu ukuyenza! Ukongeza, abantwana baya kukuvuyela ukukwazi ukuthatha inxaxheba ukukunceda uyenze, yiyo loo nto yenye yezobugcisa beHalloween yabantwana endikucebisa ukuba uzilungiselele kunye nabo.
Ukulungiselela le garland yolonwabo uzakufuna izinto ezinjengekhadibhodi emnyama neorenji, irabha, intambo emhlophe encinci, itheyiphu, iipensile kunye nezikere. Ukuba ufuna ukubona amanyathelo okuyenza, ndincoma ukuba ufunde iposti Igolide yeHalloween yokwenza nabantwana.
Igqwirha eva irabhu amanqaku ngeHalloween
Ukuba abantwana bayathanda ukufunda, ngokuqinisekileyo ngeHalloween baya kuba belungiselele amabali amaninzi kunye namabali ayoyikisayo ukuba bafunde. Ukukhumbula ukuba leliphi iphepha ababefunda kulo, akukho nto ilunge ngakumbi kunoncedo lwenqaku lencwadi. Ungathini malunga nokuthatha ithuba lokucebisa ukwenza a uphawu lobugqirha bookmark? Ngomnye wezinto ezihlekisayo zeHalloween kubantwana. Baya kuba nakho ukunika ukoyikwa kuzo zonke iincwadi zakho! Kwakhona, njengesipho seHalloween ngumbono omnandi.
Ukulungiselela le bhukumaki kuya kufuneka ezi zinto: i-Eva irabha, iglu, ukhuni, isikere, amehlo ahambayo kunye nomsonto, phakathi kwabanye. Ukuba ufuna ukufumanisa ezinye izinto kunye nendlela eyenziwa ngayo, ndincoma ukuba ufunde iposti Igqwirha eva irabhu amanqaku ngeHalloween.
Ukhakhayi lwaseMexico lubhiyozela uSuku lwabafileyo okanye iHalloween
Umhombiso odumileyo osasazekayo kwihlabathi liphela ukubhiyozela iHalloween zezona zidumileyo usuku lweMexico lweengqayi ezifileyo. Zisetyenziselwa ukuhombisa amagumbi ahlukeneyo endawo nakwilizwe leelekese. Ziyahlukahluka kakhulu!
Ukuba uthanda iingqayi zaseMexico, kunye nazo ezincinci ziya kuba nakho ukuphucula ubuchule bazo xa uzidala kuba zininzi iindlela zokuzihombisa. Kwiposi Ukhakhayi lwaseMexico lubhiyozela uSuku lwabafileyo okanye iHalloween Uya kuyifumana yonke imiyalelo yokwenza enye yezona zinto zintle zeHalloween kubantwana.
Uya kudinga kuphela i-cd okanye ikhampasi, irabha enemibala, isikere, iglu, iziphawli ezisisigxina kunye neempompo zerabha ze-eva.
Kwicrafti elandelayo awuyi kufuna ngaphezulu kwemizuzu emi-5 kwaye ungayenza ngamanyathelo amathathu nje. Oku kumnandi ikliphu emilise kwilulwane Kukulungele ukuxhonywa kumakhethini endlu kwaye uyinike umnxeba owoyikisayo kula matheko. Yenye yezona zinto zilula zeHalloween zabantwana oza kuzifumana.
Uya kufuna kuphela izinto zokuthambisa ezenziwe ngomthi, ipeyinti kunye nekhadibhodi emnyama, amehlo ahambayo, iglu, ipensile, isikere, iibrashi kunye nephepha. Uyayibona ukuba yenziwa njani ngeposi I-DIY Halloween bat.
Iphepha leziporho zokuhombisa iqela lakho leHalloween
Los zivumi Ngomnye wabalinganiswa beklasikhi abanokulahleka kulo naliphi na iqela elinomxholo weHalloween. Zikho kuyo yonke indawo! Ubugcisa obulandelayo buhamba kakuhle ekuhombiseni amakhethini kunye neishelufa ekhaya okanye kwigumbi lokufundela lesikolo ngeziqwengana ezimilise amalulwane.
Le yenye yezobugcisa zeHalloween zabantwana ongazukufuna izinto ezinzima kakhulu. Ngokuchasene noko, zizinto ezisisiseko oya kuba nazo ekhaya: amashiti amhlophe, isikere, ipensile, isiphawuli esimnyama esimnyama kunye neglu. Ukuba ufuna ukubona inyathelo ngenyathelo lwenziwa njani, ungaphoswa ngumyalezo Iphepha leziporho zokuhombisa iqela lakho leHalloween.
Amakhadi abantwana ezilo ukubhiyozela iHalloween
Nokuba kukuvuyisana nepati okanye ukumema abantwana kwenye, ezi zinto zilandelayo ziya kuba luncedo kakhulu. Yi ikhadi labantwana lezilo ukubhiyozela iHalloween.
Ukuze uyenze uyakufuna izitampu ze-monster nangona ungenayo ungayikhuphela itemplate oya kuyifumana kwisithuba sokuqala. Zonke ezinye izinto oza kuzifuna zezi: zekhadibhodi, ezimakishayo neepensile ezinemibala, iglu, isikere kunye nerabha ye-eva engwevu. Le yenye yezona zinto zonwabisayo kunye nemibala yeHalloween yezobugcisa yokwenza abantwana!
Ukuba ufuna ukubona yonke inkqubo yokudala obu bugcisa, ndikucebisa ukuba ufunde iposti Amakhadi abantwana ezilo ukubhiyozela iHalloween.
Amagqabi wamehlo anegazi ukuhombisa iHalloween
Ukuthatha ithuba ngomxholo weHalloween ungazilungiselela ii-coasters zokuqala zoqobo ukuhombisa indlu yakho okanye itheko. Banokuboniswa ngeendlela ezahlukeneyo kodwa le inamehlo anegazi ilungele esi sihlandlo! Ngaba awucingi?
Izinto oza kuzifuna kobu bugcisa yiCD, irabha enombala wegwebu, isikere, iglu, ikhadibhodi kunye neemakishi. Uyayibona ukuba yenziwa njani ngokunqakraza kwiposti Ii-coasters ezinamehlo egazi ukuhombisa iHalloween.
Ipowusta «BOO» yeHalloween
El ipowusta «BOO» yeHalloween Le yenye yezona zinto zipholileyo kubugcisa baseHalloween zabantwana apho abantwana banokuhombisa amagumbi abo endlwini. Ungayixhoma emnyango ukunika uloyiko kuye nakubani na obizayo, kwezinye iikhethini okanye eshelufini. Kuphi enye indawo oyithandayo!
Izinto eziphambili oza kuzifuna ukwenza obu bugcisa ziikhadibhodi, iipeyinti ze-acrylic, iteyiphu, iintambo, iibrashi kunye nezinye izinto onokuzifumana kwisithuba Ipowusta «BOO» yeHalloween ecaleni kwemiyalelo yokwenza ubugcisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Imisebenzi yezandla » Izihlandlo ezikhethekileyo » Imisebenzi yeHalloween » 15 I-Halloween yezandla zabantwana
Imisebenzi yeHalloween malunga namagqwirha
Imisebenzi yeekhadibhodi ezi-5 yokwenza nabantwana ngeHalloween